Abagqugquzelwe wukufuna ukuxazulula inkinga yezithudeni basungule ibhizinisi eliletha usizo eduze. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
ONksz uSindisiwe Mchunu noYenziwe Shabalala, abasunguli beVending Beesiness yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali
Abagqugquzelwe wukufuna ukuxazulula inkinga yezithudeni basungule ibhizinisi eliletha usizo eduze. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKUZWANA kwabo enyuvesi kwenze bafikelwa wumcabango wokuqala ibhizinisi uma bebona ozakwabo bephoqeleka ukuya ezitolo noma bedinga isiphuzo nezinto ezincane nje kuphela.
Liqale kanjalo ibhizinisi lomshini ohlanza iziphuzo noncamnce, i-vending machine, likaNksz uSindisiwe Mchunu, noNksz uYenziwe Shabalala, iVending Beesiness.
Lezi zintokazi, zaseMgungundlovu, ziqashisa ngale mishini ezikhungweni zemfundo ephakeme, emabhizinisini ehlukene nasemahhovisi kahulumeni.
Bobabili bane-Bachelor of Social Sciences yase-University of KwaZulu-Natali abayiphothule ngo-2015. Ngokusho kukaNksz Shabalala, oneminyaka ewu-28, oxoxe noMbele, uthi ukuzwana kwakhe noNksz uMchunu, oneminyaka ewu-26, besesenyuvesi kwenza baqale ibhizinisi.
“Sabuka ukuthi thina nezinye izitshudeni sibhekana nenkinga uma kukhona okudliwayo noma okuphuzwayo esikudingayo, okugcina kusiphoqa ukuthi siye esitolo ngisho sidinga into encane njengesiphuzo esibandayo, ama-chips nezinye izinto ezincane,” kulanda yena.
Babhalise iVending Beesiness ngo-2015, nokho abangakwazi ukuqala ukusebenza ngenxa yokweswela imali yokuthenga imishini.
Abanikazi beVending Beesiness nomunye wemishini yabo
“Besiloku sikhokha imali yokugcina ibhizinisi lethu lisebenza ngokusethethweni kuphela sisazama izindlela zokuthola usizo lwemali, nokuthe ngo-2018 sangenela umncintiswano we-UKZN Entrepreneurship Program, saba kwabayishumi bokugcina, nokuyilapho esahlabana khona ngoR80 000 wokufukula osomabhizinisi abasafufusa,” kusho uNksz uShabalala.
Uthi izinto ziqhubekile nokuba nzima besalinde le mali, abayithole ngonyaka odlule, nokuyiyona abathenge ngayo imishini emibili obiza uR40 000 umunye.
Uthi: “Sibe sesiqala ukusebenza ngo-Agasti nonyaka njengoba okwamanje zisembili izinkampani esiqashe kuzona le mishini. Kule mishini asigcini ngokuthengisa iziphuzo nezinto ezincane kuphela kodwa kukhona namanzi ethu i-Sweetgreen Water, okungenye indlela esenza ngayo imali.”
I-Vending Beesiness inamanzi ayo, okungenye yezindlela zokungenisa imali
Uthi ukuba ngosomabhizinisi kubafundise ukuthi ungalindi usizo lwemali kepha uqale usebenzise loko okuncane onako nokuthi ukuba wusomabhizinisi kuwuhambo oluthatha isikhathi noludinga uzikhandle ukuze ufinyelele esicongweni.
Ucebise abafisa ukungena ebhizinisini ukuthi bayithande into abayenzayo futhi bazimisele ngaso sonke isikhathi ukuze baphumelele.
Uthi benozakwabo bazimisele ngokuqhubeka nokusebenza kanzima ukuze bakhulise iVending Beesiness bagcine sebenehhovisi elivuthiwe.
“Sifuna nokuthi singagcini ngokusebenzela eMgungundlovu kuphela kodwa sizimisele ngokuthi imishini yethu igcine isitholakala ezweni lonke, sikwazi nokwandisa amathuba omsebenzi siqashe abantu abazosebenza ukukhulisa nokusabalalisa ibhizinisi,” kuphetha uNksz uShabalala.
Facebook: Vending Beesiness
Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo
Ungusomabhizinisi nomholi olwela ukuthi abantu abamnyama bangashiywa ngaphandle. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE